Kubhururuka kuenda kuGuyana kunogona kuve kwakananga kubva kuEurope neUSA munguva pfupi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Kubhururuka kuenda kuGuyana kunogona kuve kwakananga kubva kuEurope neUSA munguva pfupi
Airlines • nhandare yendege • Hurumende Nhau • Guyana Breaking News • Investments • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kufamba kuenda kuGuyana. Chii chiripo chekuita kuGuyana kana uchishanya? Uyu unogona kunge uri mubvunzo unopisa kune vashanyi vanoda kufamba uye kuongorora kuGuyana munguva pfupi.
Panogona kunge paine mhinduro dzakakura dzeKufamba neKushanya Indasitiri, pamwe nemikana mitsva mupombi neVirgin Atlantic Airlines, United Airlines, Jet Blue uye American Airlines.
Nyika iri kuSouth America yekumaodzanyemba kweAtlantic mhenderekedzo yeGuyana inotsanangurwa nesango rayo rakakura. Mhandara Atlantic Airlines inogona kunge ichiunza sevhisi yakananga kubva kuLondon kuenda kuGeorgetown, guta guru reGuyana. Izvi zvinogona kuteverwa neUnited States-based carriers Jet Blue neUnited Airlines uye pamwe American Airlines vakagadzirira kuwedzera basa ravo kubva kuChicago, Dallas, New York, San Francisco kana Houston kuenda kuGuyana kubva Zvita.
Hurumende yeGuyana inoti United Kingdom-yakavakirwa Mhandara Atlantic Airline inofarira kusevha nzira uye inogona kuzviita gore rinouya
. Guyana yakasununguka kubva kuBritain muna 1966 uye Co-operative Republic muna 1970, apo Mutungamiriri asiri-chinzvimbo akatsiva Gavhuna Mukuru. Bumbiro idzva muna 1980 rakapa Mutungamiriri masimba masimba. Dare remakurukota rinotungamirwa neMutungamiriri weNyika, uye kune nhengo makumi matanhatu nenomwe dzeNational Assembly dzakasarudzwa nekumiririrwa kwakaringana.
Guyana izere neruzivo rwepanyama rwuri kuNorth East Coast yeSouth America uye ndiyo yega nyika inotaura Chirungu. Pakati pe1o & 9o North Latitude uye 57o & 61o West Longitude, pamuganhu weVenezuela nekuMadokero, Brazil kuSouth, Suriname kuEast.
Guyana ndiyo nyika yechina-diki muSouth America mushure meFrench Guiana, Suriname neUruguay; ine nzvimbo ina dzakasiyana dzenzvimbo: iyo Low Coastal Plain; iyo Hilly Sand uye Clay Bhandi; iyo Highland Dunhu uye neImukati maSavannahs. Iyo nharaunda iri 214,970 sq.km. Inenge 75% yenzvimbo yepasi ichiri sango rakasimba, uye 2.5% inorimwa. Mhenderekedzo yegungwa ndeye 1 mita kusvika ku 1.5 metres pazasi pegungwa pamvura yakakwira ichida hurongwa hwakajeka hwemakorani. Iyo inonyanya kukosha zvicherwa ndeye bauxite, goridhe, uye madhaimani. Nzizi huru idhemerara, Berbice, Corentyne, uye Essequibo.
Guyana inzvimbo inopisa inotonhorera uye inodziya kweakawanda egore, ine hunyoro, inodzorwa nemhepo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva; mwaka miviri yekunaya (Chivabvu kusvika pakati paNyamavhuvhu, Mbudzi kusvika Ndira). Zvinoreva tembiricha ye27 ° C uye avhareji tembiricha iri pakati pe24 ° C kusvika 31 ° C. Mvura inonaya ingangoita 2,300mm pagore muGeorgetown.
Vagari veGuyana vangangoita 747,884 (Census 2012) yeavo 90% vanogara mumahombekombe egungwa nemabhangi enzizi huru. Pane njodzi yemarariya mune zvimwe zvikamu zvemukati.
Gurukota rezvivakwa zveveruzhinji David Patterson akasimbisa kuti akaita hurukuro nemukuru mukuru wendege.
"Vanga vari parunhare rweSkype kwandiri nekuMinister weMari, pavari vachiuya kuno. . . . Uyu aive Director wenhandare yendege nekutarisa nzira. Akanga achienda kumusangano uye aida kuziva kuti chinzvimboi cheGuyana, achiti anoda kuisa Guyana munzira yavo yegore ra2020, "akadaro Patterson.
United States-based carriers Jet Blue uye United Airlines vakaratidzawo kufarira mumusika weGuyana kunyangwe American Airlines iri kuda kuwedzera basa rayo kuGuyana kubva Zvita.
Nepo Mhandara Atlantic yakaronga nendege kuenda kuBarbados nedzimwe nzvimbo dzekuCaribbean, Guyana haina kupihwa nendege yakanangana nendege kubva kune chero nyika yeEurope.
Zvisinei, vakuru vakuru pano vanoti pamwe nenyika inotarisirwa kutanga kutengeserana kutsvaga oiri gore rinouya, Guyana inogona kuve inofarira ndege dzepasi rose.
Zvimwe zvirimo paGuyana